Mateu 27 - Bhaibheri Dzvene [Shona Bible 2009]
&nbspKwakati kwaedza vaprista vakuru vose navakuru vavanhu vakarangana pamusoro paJesu kuti vamuvuraye.
&nbspVakati vamusunga vakaendesa kuna Pondiyo Pirato mubati.
&nbspZvino Judhasi wakanga amutengesa avona kuti warashwa, ndokuzvidya moyo akadzosera masirivheri aya anamakumi matatu kuvaprista vakuru navakuru,
&nbspAchiti: Ndatadza, ndatengesa ropa risinemhosva. Vakati: Tinei nazvo? Tavona iwe.
&nbspAkakandira pasi masirivheri mutembere, akabva akaenda akandozvisungirira.
&nbspVaprista vakuru vakatora makobiri esirivheri vakati, hazvina kufanira kuti tiaise muchivigiro chemari, nokuti mutengo weropa.
&nbspVakarangana, vakatenga nawo munda womuvumbi wehari, kuzovigapo vasugwa.
&nbspNaizvozvo munda uyo wakanzi munda weropa kusvikira zuva ranhasi.
&nbspZvino zvakazadziswa zvakarehwa naJeremiya muporofita achiti: Vakatora makobiri esirivheri anamakumi, matatu, mutengo waiye wakatarirwa mutengo iye navana vaIsiraeri wavakatarira mutengo.
&nbspVakaaripira munda womuvumbi wehari, sezvandakarairwa naShe.
&nbspZvino Jesu wakamira pamberi pomubati. Mubati akamubvunza akati: Ndiwe mambo wavaJudha here? Jesu akati kwaari: Wataura iwe.
&nbspAsi wakati achipomerwa mhosva navaprista vakuru navakuru, haana kupindura chinhu.
&nbspZvino Pirato akati kwaari: Haunzwi zvinhu \_add kuti\_add* zvingani zvavanokupupurira here?
&nbspAsi haana kumupindura kunyange neshoko rimwe chete, zvokuti mambo wakashamiswa kwazvo.
&nbspZvino pamutambo mubati aisunungurira chaunga musungwa wavanenge vada.
&nbspZvino vaiva nenguva iyo nomusungwa wakakurumbira wainzi Bharabhasi.
&nbspNaizvozvo vakati vavungana pamwechete, Pirato akati kwavari: Munoda kuti ndikusunungurirei aniko? Bharabhasi kana Jesu unonzi Kristu?
&nbspNokuti wakanga achiziva kuti vakanga vamuisa kwaari negodo.
&nbspZvino wakati agere pachigaro chokutonga, mukadzi wake akatumira kwaari, achiti: Usava nechokuita nomunhu uyo wakarurama, nokuti ndatambudzika zvinhu zvizhinji nhasi pakurota nokuda kwake.
&nbspAsi vaprista vakuru navakuru vakagombedzera chaunga kuti vakumbire Bharabhasi, Jesu aparadzwe.
&nbspMubati akapindura akati kwavari: Ndoupiko pavaviri wamunoda kuti ndikusunungurirei? Vakati: Bharabhasi.
&nbspPirato akati kwavari: Ndichagoiteiko naJesu unonzi Kristu? Vose vakati kwaari: Ngaaroverwe.
&nbspMubati akati: Nemhaka yeyi? Chiiko chakaipa chaakagoita? Asi vakanyanyisa kudanidzira vachiti: Ngaaroverwe!
&nbspZvino Pirato achivona kuti haangadzivisi chinhu asi kuti pamuka bope, wakatora mvura akageza mavoko pamberi pechaunga achiti: Handina mhosva yeropa romunhu uyu wakarurama, Zvivonerei imwi!
&nbspVanhu vose vakapindura vakati: Ropa rake \_add ngarive\_add* pamusoro pedu napamusoro pevana vedu.
&nbspZvino akavasunungurira Bharabhasi, asi wakati arova Jesu, aka\_add mu\_add*kumikidza kwavari kuti aroverwe pamuchinjikwa.
&nbspZvino varwi vomubati vakaisa Jesu mumba momubati, hondo yose ikavunganira kwaari.
&nbspVakamukurura, vakamufukidza nguvo shava,
&nbspVakaruka korona yemhinzwa, ndokuisa pamusoro wake, norutsanga muruvoko rwake rworudyi. Vakafugama mabvi pamberi pake vakamusweveredza vachiti: Hekanhi, Mambo wavaJudha!
&nbspVakamupfira mate, vakatora rutsanga vakamurova musoro.
&nbspVakati vamusweveredza, vakamubvisa nguvo tsvuku, vakamupfekedza nguvo dzake vakaenda naye kundorovera.
&nbspVakati vachibuda, vakawana murume wekurini, wainzi Simoni. Iye vakamumanikidza kuti atakure muchinjikwa wake.
&nbspVakati vasvika panzvimbo inonzi Gorogota, ndokuti: Nzvimbo yedhehenya.
&nbspVakamupa vhiniga yakavhenganiswa nenduru kuti amwe asi wakati aravira akaramba kumwa.
&nbspVakati vamurovera pamuchinjikwa, vakagovana nguvo dzake pakati pavo, vachikanda mijenya kuti zvakarehwa nomuporofita zviitike zvinoti: Vakagovana nguvo dzangu, vakakanda mijenya pamusoro pezvokufuka zvangu.
&nbspUye vakagara pasi, vakamurindapo.
&nbspVakaisa pamusoro pemusoro wake \_add rugwaro rwe\_add*mhosva yake rwakanyorwa \_add kuti\_add*: UYU NDIJESU MAMBO WAVAJUDHA.
&nbspKwaiva namakororo maviri akaroverwa pamwe chete naye, mumwe kurudyi, mumwe kuruboshwe.
&nbspVakanga vachipfuvura vakamunyomba, vachidzungudza misoro yavo,
&nbspvachiti: Iwe wokuputsa tembere noku\_add i\_add*vakazve namazuva matatu, zviponese; kana uri Mwanakomana waMwari, buruka pamuchinjikwa.
&nbspSaizvozvovo vaprista vakuru navanyori navakuru vakamusweveredza vachiti:
&nbspWakaponesa vamwe, iye haagoni kuzviponesa. Kana ari Iye mambo wavaIsraeri, ngaaburuke zvino pamuchinjikwa tigomutenda.
&nbspWaivimba naMwari; ngaachimusunungura zvino kana achimuda. Nokuti wakati ndiri Mwanakomana waMwari.
&nbspNamakororo akaroverwa pamwe chete naye, akamuzvidza saizvozvo.
&nbspZvino kubva paora rechitanhatu rima rakavapo panyika yose kusvikira paora repfumbamwe.
&nbspNeora rinenge repfumbamwe Jesu akadanidzira nenzwi guru achiti: "Eri, Eri ramasabakatani?" Ndokuti: Mwari wangu, Mwari wangu mandisiyireiko?
&nbspVamwe vakanga vamirepo vakati vanzwa vakati: Uyo unodana Eria.
&nbspPakarepo mumwe wavo akamhanya, akatora chipanje, akazadza nevhiniga ndokuisa parutsanga, akamupa kuti amwe.
&nbspAsi vamwe vakati: Regai timbovona kana Eria achivuya kuzomuponesa.
&nbspZvino Jesu akadanidzirazve nenzwi guru akabudisa mweya.
&nbspZvino tarira, vheiri retembere rakabvaruka kuita \_add mapandi\_add* maviri, kubva kumusoro kusvikira pasi. Nyika ikadengenyeka, mabwe akatsemuka.
&nbspMahwiro akazaruka; nemitumbi mizhinji yavatsvene vakanga vavete yakamutswa;
&nbspvakabuda pamahwiro iye amuka vakapinda muguta dzvene, vakavonekwa kuvazhinji.
&nbspZvino mukuru wezana navaiva naye vakarinda Jesu vakati vachivona kudengenyeka kwenyika nezvakaitwa, vakatya zvikuru vakati: Zvirokwazvo uyu wakanga ari Mwanakomana waMwari.
&nbspVakadzi vazhinji vakanga varipo, vakatarira vari kure, vakanga vatevera Jesu vachibva Gariri vachimushandira.
&nbspPakati pavo kwakanga kunaMaria Magidharini, naMaria mai vaJakobho naJose, namai vavanakomana vaZebhedhi.
&nbspZvino ava manheru kukasvika mumwe mufumi weArimatiya wainzi Josefa. Iyevo pachake waiva mudzidzi waJesu.
&nbspAkaenda kunaPirato akakumbira mutumbi waJesu. Pirato akaraira kuti agamuchidzwe mutumbi.
&nbspJosefa wakati atora mutumbi, akauputira nomucheka werineni wakachena.
&nbspAkauviga muhwiro hwake hwutsva, hwaakanga achera muhwe; akakungurusira ihwe guru pamuromo wehwiro akabva.
&nbspPaivavo naMaria Magadharini nomumwe Maria vagere vakatarisana nehwiro.
&nbspNezuva raitevera ndiro zuva raitevera zuva rokugadzirira, vaprista vakuru navaFarisi vakavungana kunaPirato,
&nbspvakati: Ishe tinorangarira kuti munyengeri uyu achiri mupenyu wakati: Mazuva matatu apfuvura ndichamuka.
&nbspSaka rairai kuti hwiro hwuchengetwe kusvikira nezuva retatu; zvimwe vadzidzi vake vangavuya vusiku vakamuba. Vagoti kuvanhu: Wakamutswa kuvakafa. Kurashika kokupedzisira kukazopfuvura kokutanga.
&nbspPirato akati kwavari: Imwi munavarindi, endai muhwuchengete sezvamunoziva.
&nbspVakaenda, vakandochengeta hwiro, vakaisa chiratidzo chokusimbisa pabwe, vakaisa varindi.